1 Enwere m ike Naghachi faịlụ site WD Ihe mpụga ike mbanye?
M nwere 500 GB WD Ihe mpụga ike mbanye. M nwere banyere 40 nchekwa na ọtụtụ bara uru faịlụ na ya. Nke a ụtụtụ mgbe m meghere ya m chọpụtara na ihe karịrị 10 nchekwa e okụrede. M ji n'aka nke na m na-ehichapụ bụla n'ime ha. Mmadụ ga-enwe ike ịgwa otú m ike weghachite m furu efu nchekwa? M ga-aghọta enyemaka ọ bụla ị ga-enwe ike ịgbatị. Ekele.
Ọfọn, usoro njehie nwere ike ịbụ na isi ihe mere gị nchekwa pụọ ​​n'anya. Otú ọ dị, ị na-adịghị na-adị oke nchegbu banyere ya. My aro n'ihi na ị bụ ịkwụsị iji gị WD Ihe mpụga ike mbanye na anya n'ihi na a na ịba uru iji nyere gị aka ozugbo. N'ihi na ka ogologo oge gị furu efu nchekwa adịghị e overwritten site ọhụrụ data na gị mbanye, gị nwere ike omume weghachite ha na a WD Ihe data mgbake usoro.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ na-enyere gị aka naghachi WD Ihe data na mfe na n'ihe ize ndụ free ụzọ. Faịlụ gị WD Ihe mpụga ike mbanye nwere ike ga-efu n'ihi na gị na mberede ma ọ bụ kpachaara anya nhichapụ, ụgbọala formatting, virus agha ma ọ bụ usoro njehie, na a usoro bụ nnọọ ihe dị gị mkpa. Ọ naputa niile faịlụ iche-iche site na gị WD Ihe mpụga ike mbanye, gụnyere oyiyi, videos, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ, txt faịlụ, wdg
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke usoro ihe omume ka iṅomi gị WD Ihe mpụga ike mbanye na anya n'ihi na furu efu faịlụ na ya ugbu a.
2 Igosi WD Ihe Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Ugbu a, ka hazie WD Ihe data mgbake na Wondershare Data Recovery maka Windows. Ọ bụrụ na ị a Mac nwe, ị nwere ike nweta Mac version na-eso yiri nzọụkwụ kwa.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode naghachi data si WD Ihe mpụga ike mbanye
Mgbe amalite usoro ihe omume na kọmputa gị, ị ga-ahụ ihe interface na 3 mgbake ụdịdị. I nwere ike ịgụ ntụziaka ndị a ụdịdị anya ịmụta otú ha na-arụ ọrụ.
Ebe a, na-agbake ehichapụ, formatted ma ọ bụ merụọ faịlụ site na gị WD Ihe mpụga ike mbanye, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị WD Ihe mpụga ike mbanye
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji họrọ nkebi nke gị WD Ihe mpụga ike mbanye, nke ga-edepụtara ke omume window, na pịa "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu faịlụ na ya.
Ọ bụrụ na faịlụ na-efu n'ihi na gị mbanye formatting, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Cheta na: Biko mee n'aka na gị WD Ihe mpụga ike mbanye nwere ike ọma ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na WD Ihe mpụga ike mbanye
Mgbe scanning, hụrụ ọdịnaya na gị WD Ihe mpụga ike mbanye ga-egosipụta na window. Ị nwere ike ịlele ma gị furu efu faịlụ nwere ike natara ma ọ bụ site na faịlụ aha.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka akara faịlụ na ị chọrọ iji naghachi n'aka gị WD Ihe mpụga ike mbanye na iti on "Naghachi" button na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Cheta na: Iji zere Natara faịlụ site na-overwritten, biko adịghị azọpụta ha azụ gị WD Ihe mpụga ike mbanye n'oge mgbake usoro.
> Resource> Naghachi> WD Ihe Iweghachite: Olee naghachi WD Ihe Data